सामाजिक सञ्जाल र एप्लिकेशनहरु सुरक्षित रहेको पुष्टि भएपछि मात्रै प्रयोग गर्नदिन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सुरक्षा, गोपनियता र प्रयोगका हिसावले ठिक रहेको कुरा नियामक निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल र एप्लिकेशन डाउनलोड र प्रयोग गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । केही दिनअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत सहभागी …
दुई वर्षभित्र मुलुकभर फोरजीको सेवा पुग्ने गरी काम भइरहेको छः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकभर नै दूरसञ्चारको फोरजीको सेवा पुग्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राष्ट्रियसभाको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै …
इन्टरनेट स्लो हुनुको कारण के हो ?
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकप्रति ग्राहकको कति धेरै गुनासो छ भनेर बुझ्न अन्त जानुपर्दैन । सेवा प्रदायकको फेसबुक पेजमा आउने कमेन्टमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेटको स्पिड सुस्त भएको भन्ने गुनासो हुन्छन् । प्रायःले मैले यति स्पिडको इन्टरनेट लिएको थिएँ । तर थोरै मात्र …
दूरसञ्चारका ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन
काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले दुर सञ्चार सम्बन्धी वस्तु तथा सेवा खरिद एंव सेवा विस्तारका कार्यहरुमा स्वदेशी कम्पनीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले गुणस्तर, समय र लागतमा प्रतिष्पर्धी हुने नेपाली कम्पनीहरुलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर ठेक्का प्रक्रिया …
फेसबुकले भारतीय रिलायन्स कम्पनीको जियो प्लेटफर्ममा लगानी गर्ने, १० प्रतिशत शेयर किन्ने
मुम्बई । सामाजिक संजालको विश्वप्रसिद्ध संस्था फेसबुकले भारतको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको सहायक कम्पनी जियो प्लेटफर्ममा ४३ हजार ५७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । जियोको करिब १० प्रतिशत शेयर फेसबुकले खरिद गर्नेछ । रिलायन्स इन्डस्ट्रिजद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा फेसबुकले जियो प्लेटफर्ममा …
लकडाउनमा मोबाइलको ब्यालेन्स सकिए चिन्ता नगर्नुस्, नेपाल टेलिकमले दिँदैछ निःशुल्क सेवा
काठमाडौं । लकडाउन अवधीमा मोबाइलको ब्यालेन्स सकिएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अब नेपाल टेलिकमले ब्यालेन्स सकिएपनि फोन नकाटिने सुबिधा दिएको छ । यो सुबिधाले ब्यालेन्स सकिएर फोन गर्न नपाएका झण्डै २ लाख नागरिकलार्ई तत्कालै राहत मिल्नेछ । टेलिकमले फोन र इन्टरनेट नकाटिने तथा एसएमएस …
लकडाउनमा इन्टरनेट सेवा नकाट्नु, लकडाउन पछि विलम्ब शुल्क नलिई भुक्तानी लिनूः प्राधिकरण
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउनका समयमा इन्टरनेट सेवा सूचारु राख्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । ‘लकडाउन’को समयमा केही इन्टनेट सेवा प्रदायकले समयमा महशुल भुक्तानी नगरेको कारण सेवा अवरुद्ध गरेको भन्ने गुनासो आएसँगै प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्देशन …
टेलिकमको भ्वाइस तथा डाटा सेवामा ‘स्टे कनेक्टेड अफर’ निरन्तरता
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारण मुलुकमा कायम रहेको लकडाउनको अवस्थामा आफ्ना ग्राहकलाई भ्वाइस तथा डाटा सेवामा उपलब्ध गराएको स्टे कनेक्टेड अफरको अवधि थप गरेको छ । सरकारले तेस्रो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेपछि कम्पनीले ग्राहकको …
काठमाडौं । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले हालै सरकारले गरेको निर्णय अनुसार बिहीबारबाट लागू हुनेगरी डेटा सेवामा पे एज यु गो को शुल्क २५ प्रतिशतले घटाएको छ । यससँगै एनसेलका ग्राहकले अब यस लकडाउनको अवधिभर अझै सुलभ दरमा एनसेलको डेटा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् …